Mootummaan rakkoo geejibaa duraan hin turre uumuun Irreecha Hora Arsadii danquuf yaalaa oole – AMBO TV
Ayyaana Irreecha Hora Arsadii Bishooftuutti guyyaa borii geggeeffamu ilaalchisuun, mootummaan qaamolee nageenyaafi poolisii ramaduun jala bultiirraa kaasee to’achuuf yaalaa jira.
Irreeffattoonni miliyoonaan lakka’aman Irreecha Hora Finfinnee erga xumuranii booda, gara Bishooftuutti fuula qajeelfachaa waan turaniif dhorkaan daandii irratti hammaatuus, Magaalaan Bishooftuu keessummoota hedduu keessummeessuun qophii Irreechaa akkaatuma baratameen simachaa jirti.
Haa ta’u malee mootummaan baay’ina hirmaattotaafi mormii irreecha Finfinnee irratti isa mudatetti rifachuun, akka uummatni gara Hora Arsadiitti hin dabarreef karaa sadii oliin dhorka jira.
Konkolaattonni dhuunfaafi uummataa magaalaa Finfinnee irraa namoota fe’anii gara Bishooftuutti adeemaa jiran bakka Biyyoo Diimtuufi Moojoo jedhamutti kan ittifaman yoo ta’u ajajni qaama olaanurraa darbe jedhamuun, hirmaattonni akka karaatti deebi’an gariin ammoo akka miillaan adeemanii gara Bishooftuu dhaqan taasifamee jira.
Irreeffattoonni miliyoonaan lakka’aman kanneen magaalaa Bishooftuu seenanii jiranis, hoteelotaafi daandii gubbaatti sakkatta’amuun, gariin poolisiin butamaa jiraachuus mirkaana’eera
Mormiin irreeffattoonni guyyaa har’aa Finfinneetti dhageessisaniifi haalli Naannoo Hora Finfinnee ture mootummaa rifaasisuusaa dubbii rogeeyyiiwwan mootummaa marsaa Hawaasummaa irratti maxxansaa jiran irraa hubachuun ni danda’ama.
Yeroo ammaa kana poolisii Federaalaa, Oromiyaafi raayyaan Ittisa biyyaa magaalaa Bishooftuu keessatti Konkolaataa gurguddaan socho’aa kan jiraani tikoonni mootummaas bobbaafamuun sabboontota adamsaa jiraatanis humni irree oromoo cabsuu danda’u akka hin jiraanneef qeerroofi qarreen xiiqiidhaan hedduuminaan magaalaa bishooftuu seenaa jiru.
Irreechi Hora Arsadii akkuma waggoota darbaniitti Irree Oromoo ta’uun guyyaa boriis miliyeenota ni keessummeessa jedhamee eegama.
Dhumaa irrattis Uumannii oromoo sodaa tokko malee akka cabsatee seenu qeerroon magaalaa bishooftuus waamicha dabarsaniiru.
Previous PostEthiopia’s Oromo protest, demand freedom for jailed leaders
Next PostBishooftuu : Jawaar Garmaamu tola maaf mana hidhaa oolaa sirba sagalee qarree oromootiin